I-China Mineral Fiber Ceiling BC005 ifektri kanye nabakhiqizi | Beihua
1. Umphumela omuhle kakhulu wokuhlobisa.
2. Ukusebenza kahle kokufakelwa kokushisa. Ukuhanjiswa okufudumele kwamapaneli amaminerali oboya obunamaminerali kuphansi kakhulu, futhi kungumbhalo omuhle wokufakelwa okuvumayo, ongenza igumbi lifudumele ebusika futhi lipholile ehlobo, futhi longe ngempumelelo amandla abasebenzisi.
3. Ukumuncwa komsindo nokunciphisa umsindo. Izinto ezingavuthiwe ezisetshenziswayo zebhodi yamaminerali ezinuka umsindo u-ultimate-fine mineral fiber fiber ezinobunzima be-250-300Kg / m3. Ngakho-ke, inengcebo yama-micropores angena ngaphakathi, angadonsa kahle amaza omsindo futhi anciphise ukubonakaliswa kwamagagasi omsindo, ngaleyo ndlela ithuthukise ikhwalithi yomsindo ongaphakathi futhi inciphise umsindo.
4. Ukuphepha nokuvimbela umlilo.
5. Ukuvikelwa kwemvelo okuluhlaza okotshani. Ibhodi eligcina imisindo yoboya obunamaminerali alinazo izinto eziyingozi emzimbeni womuntu.
6. Umshuwalense-ubufakazi futhi insured. Ngenxa yokuthi ibhodi ebamba imisindo yoboya obunamaminerali iqukethe inani elikhulu lama-micropores futhi indawo ethize engaphezulu ikhulu, ingakwazi ukudonsa futhi ikhulule ama-mocule amanzi emoyeni bese ilungisa umswakama womoya ongaphakathi.
7. Ukusika okulula nokuhlobisa okulula. Ibhodi eligcina imisindo efaka u-mineral u-sawed lingafakwa i-sawed, libethelwe, lihlelwe, futhi liboshwe, futhi lingasikwa ngommese wephepha elijwayelekile, ngakho-ke akukho msindo ngenkathi usika. Inezindlela ezahlukahlukene zokuphakamisela phezulu njengokufaka emaflethini, ukufaka ukunamathela, uhlaka oludaluliwe, ifreyimu efihliwe, njll., Engahlanganisa imiphumela yokuhlobisa yezitayela zobuciko ezihlukile.
8. Inqubo yeWet, qedela yonke inqubo ngokudonsa, ukukopisha i-Fourdrinier, ukuphuma komzimba, ukujikijela, ukomisa, ukushaya, ukufafaza, ukuqeda nezinye izinqubo.
9. Ngesikhathi sokuhamba kwebhodi yamaminerali uboya, naka ukuthembeka kwephakheji, ubufakazi bomswakama kanye nobufakazi bemvula, ukuvikela ukuthi ibhodi lingangeni, elizothinta ukusebenza kokufakwa.
10. Ibhodi yoboya yamaminerali kufanele ilayishwe kalula futhi ilayishwe ngesikhathi senqubo yokuphatha. Ibhodi kufanele libekwe phansi, hhayi ngokuqondile, ukuvikela ukulimala ekhoneni.
Esedlule: Amaminerali Fiber Ceiling BH002
Olandelayo: Igridi Emisiwe Yophahla Olumisiwe